CREB နှင့် DeltaFosB (၂၀၀၃) မှသင်၏ ဦး နှောက် On Porn မှဗီဇဖော်ပြချက်နှင့်ကိုကင်းဆုကိုစည်းမျဉ်း
နတ် neuroscience ။ 2003 နိုဝင်ဘာ;6(11): 1208-15 ။ EPub 2003 အောက်တိုဘာ 19 ။
McClung, CA, Nestler EJ.
အဆိုပါတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာအခြေခံပညာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 5323 ဟယ်ရီ Hines က Boulevard, Texas ပြည်နယ် Dallas 75390-9070, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Center ကဦးစီးဌာန။
DeltaFosB (FosB ပုံစံတစ်ခု) နှင့် CREB (cAMP response element binding protein) ပရိုတိန်းများသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများ၌ကူးယူထားသောအချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများနှင့်သူတို့ထိန်းညှိသောမျိုးဗီဇများသည်မရှင်းလင်းသေးပါ။ ဦးသွေးဆောင် Transgene ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသီခငျြးဆိုကျနော်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ DeltaFosB ၏စကားရပ်နှင့် Active ပရိုတိန်း-1 (AP-1) ရန် DeltacJun လုပ်ပေးအဖြစ် CREB နှင့်တစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ် CREB, မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ကိုတွေ့.
သို့သော် CREB မတူဘဲကာလတိုနှင့်တာရှညျ DeltaFosB သော induction ဗီဇစကားရပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ တာရှညျ DeltaFosB စကားရပ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တိုးမြှင့်သော်လည်း, ရေတိုရေရှည် DeltaFosB အားဖြင့်၎င်း, CREB အားဖြင့်သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ်သိသိသာသာဆင်တူကြီးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ. တစ်ပိုရှည်ကိုကင်းကုသမှုပြီးနောက်ဗီဇစကားရပ် ပို. ပို. DeltaFosB မှီခိုဖြစ်လာခဲ့သည်သော်လည်းတိုတောင်းတဲ့ကိုကင်းကုသမှုပြီးနောက်ဗီဇစကားရပ်, CREB အပေါ်ပိုပြီးမှီခိုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် CREB နှင့် DeltaFosB ၏မော်လီကျူးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသတ်မှတ်နှင့်ကိုကင်းစွဲအထောက်အကူပြုကြောင်းဗီဇပြွတ်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။